Buddhism » မနေသူတွေကြားထဲမှာ နေရမယ်	10
အင်း နောက်ဆုံးတော့လည်း “မနေသူတွေကြားထဲမှာ နေပါ့မယ်” ။ About who who
who who has written 95 post in this Website..
View all posts by who who →	Blog
kai says: ပျောက်နေတာတော်တော်ကြာပြီနော..
အဲဒါတွေကြားထဲနေပြီး.. အဲဒါတွေကို.. ထိုက်သင့်တဲ့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်သူကို.. တရားရသူ.. အရိယာလို့ခေါ်တယ်လို့.. ဆရာမကို..ဆရာလုပ်ကြည့်လိုက်ရပါကြောင်း… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 140
who who says: “peace does not mean to be inaplace where there is no noise, trouble, or hardwork. Peace means to be in the midst of all those things and still be calm in your heart. That is the real meaning of peace”
ခင်ဇော် says: နေရမှတော့ လွတ်အောင်နေ။
မြစပဲရိုး says: အခု ကျွန်မ နေတဲ့ အရပ်မှာ
uncle gyi says: ဖတ်နေတုန်းသူကြီးမှစာလာရေးပါ့မလားလို့
padonmar says: သလ္လေခသုတ်ကို သတိရမိပါတယ်။
Ma Ma says: အရှုပ်ထဲမှာ ရှင်းအောင်နေဖိုိ့ဆိုတာ ကိုယ့်စိတ်က အရင်ဆုံးရှင်းနေဖို့ လိုမယ်ထင်တယ်။
ကိုယ့်စိတ်ကိုက ရှုပ်နေတာကို အပြင်က အရှုပ်နဲ့တွေ့ပြီး ဘယ်လိုရှင်းနိုင်ပါ့မလဲ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12177
Alinn Z says: .ဘယ်သို့ ဘယ်ပုံ ဖြစ်အောင်(သို့မဟုတ်) မဖြစ်အောင်
အောင် မိုးသူ says: မှန်ပါ့ ခုတလောအဲ့စိတ်တွေ ပေါ်ပေါ်လာတယ်။ ငါ့မှာ ဘာကြောင့်ပူပန်မှုတွေများနေရသလဲ။ ဘယ်လို ငြိမ်းချမ်းအောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို နေရမလဲဆိုတာကိုပဲ တွေးနေမိတော့တယ်။ တတ်နိုင်သမျှ အကုသိုလ်နည်းအောင် နေနေတယ်။
Mike says: .သဂျီးပြောတဲ့ “အရှုပ်ထဲမှာရှင်းအောင်နေ” ဆိုတဲ့တရားကို ဆရာတော်ဦးဇောတိက စာအုပ်ထုတ်လို့